Google Gosiputa G Suite Enterprise, yana nchekwa na ndozi ndozi | Gam akporosis
José Alfocea | | Noticias, Nche
Ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa iji ngwa arụpụta arụpụtara n'ime Google's G Suite, ma ugbu a ụlọ ọrụ ahụ na-emeziwanye ọrụ ahụ site na iwebata G Suite Enterprise Edition na ọtụtụ nche na njikwa.
N’oge gara aga, amara dị ka “Google Apps,” G Suite gụnyere ịnweta ọrụ dịka Gmail, Google Drive, Documents, Spreadsheets, slides, Forms, Google Calendar, na Google Sites, tinyere ọrụ ndị ọzọ.
1 G Suite ọkwa maka azụmaahịa
1.1 Mgbochi Mfu Data (DLP)
1.2 Enwetakwu nchebe na Gmail site na izo ya ezo S / MIME na njikọta BigQuery
G Suite ọkwa maka azụmaahịa
Agbanyeghị na ngwugwu G Suite bụkarị ebumnuche maka ụlọ ọrụ na ngalaba azụmaahịa, nke bụ eziokwu bụ na a na-ejikwa ya eme ihe na ngalaba mmụta, Gọọmentị na ọbụlagodi na mkpakọrịta na otu na-abụghị uru. Site na iwebata ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ, G Suite Enterprise, Google na-enye ọrụ niile ọ na-enye taa, mana na ọkwa ọhụrụ dị elu, yana jụụ ọhụrụ atụmatụ dị ka data ọnwụ mgbochi (DLP), mma otu management, na izo ya ezo atụmatụ.
Mgbochi Mfu Data (DLP)
Mgbochi data ọnwụ ma ọ bụ DLP abụghị ihe ọhụrụ na Google dịka ọ bụ atụmatụ - atụmatụ nke etinyelarị na ọrụ email Gmail maka ndị ọrụ G Suite Education niile. Nnukwu ihe dị iche bụ na Ugbu a, na ọkwa ọhụrụ a maka ụlọ ọrụ ahụ, a ga-etinye ya n'ọrụ na nke mbụ ya na Google Drive.
Google akọwaala na Mgbochi Mbelata Data (DLP) na Google Drive na-eme ka ọ 'ka dị mfe maka ndị nchịkwa iji kpuchido data dị nro, na-achịkwa ọdịnaya dị iche iche nwere ike ịchekwa ma chebe ndị ọrụ site na ịkesa ozi nzuzo na mpụga.
Nchedo D Sup nke G Suite gafere ụkpụrụ DLP yana iwu na-ahazi mfe na OCR maka ọdịnaya echekwara na onyonyo ka ndị nchịkwa wee nwee ike mejuputa atumatu ma chịkwaa otu esi ekenye data.
N’afọ 2015, anyị bidoro DLP maka Gmail ka ọ dị mfe iji hazie iwu, ihe onyoonyo onyonyo OCR, yana ịhazi ọkaibe. Taa, anyị na-agbatị DLP na Google Drive, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị nchịkwa iji nweta data dị nro, na-achịkwa ọdịnaya enwere ike ịchekwa, ma na-echekwa ndị ọrụ megide ịkekọrịta ihe ọmụma nzuzo nke mpụga. Nchedo G Suite DLP gafere DLP ọkọlọtọ site na iji iwu nhazi iwu yana nnabata OCR nke ọdịnaya echekwara n'ime onyonyo ka ndị nchịkwa wee nwee ike mejuputa atumatu ma chịkwaa otu esi ekenye data.
Enwetakwu nchebe na Gmail site na izo ya ezo S / MIME na njikọta BigQuery
Iji melite nchekwa email na Gmail, G Suite na-enyezi ihe nzuzo S / MIME nke na-enye nzukọ ohere itinye asambodo nke ya. Ndị nchịkwa nwekwara ike ịmanye iji ojiji nke izo ya ezo dabere na iwu nzukọ. Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nwere ike nyochaa ndekọ Gmail "site na ijikọta njikọ BigQuery ka ndị nchịkwa nwee ike ịrụ ọrụ ọkaibe, arụmọrụ arụmọrụ dị elu, nyochaa data ha ma mepụta dashboard omenala." Ihe ngwọta nke nchekwa ozi-e nke atọ na-adịkwa mfe ijikọta na Gmail n'ihi mmelite emelitere ugbu a.
Ulo oru ohuru nke G Suite na enyere ndi otu aka mee nyocha nkwenye abụọ na ndị otuMa ọ bụ site na usoro ọdịnala ma ọ bụ site na igodo Bluetooth ma ọ bụ NFC kachasị nchebe dị. Ndị nchịkwa ga-enwe ike ịbelata ndị ọrụ na ntinye echiche dabere na isi ụzọ naanị, yana ijikwa nkenye nke igodo ndị ahụ yana akụkọ ojiji.
Nkwuputa Google mere banyere ọkwa ọhụụ ọhụrụ maka G Suite "ezubere iji nye udo nke uche ndị ahịa anyị chọrọ ma kwesị," ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru site na mbipụta na ya ukara blog, na ozi niile dị ugbu a na G Suite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Gosiputa G Suite Enterprise, yana nchekwa na ndozi njikwa
Samsung ga-ekpughere mbadamba ụta ya na MWC n'ọnwa a